Haya Bint al-Xuseen: Xaaska amiirka Dubai oo maxkamad UK ku taallo ka dalbatay arrin la yaab lehYour Everyday News
Silsiladda Heshiisyadii Qabaailka Somaliland & Britain
Haya Bint al-Xuseen: Xaaska amiirka Dubai oo maxkamad UK ku taallo ka dalbatay arrin la yaab leh
July 31, 2019 Booddaale News News 0
Xaaska hoggaamiyaha Dubai oo ka mid ah madaxda bariga dhexe ugu caansan ayaa maxkamad ku taallo UK ka codsatay iney bixiso amar ay ugu ilaalineyso guurka qasabka ah.
Xaaska Sheikh Mohammed Al Maktoum, Amiirad Haya Bint al-Xuseen ayaa ah haweeneyda seddexaad oo oo ka baxsatay Imaaradka.
Bishan ayey ahayd marki ay sheegtay iney nafteeda u baqday oo ay hadda ku dhuumaaleysaneyso magaalada London.
Haddaba dacwadda kiiska Amiirad Haya iyo Seygeeda ayaa London ka furmay Talaadada Shalay.
Maxkamadda maxaa ka dhacay?
Amiirad Haya oo ka baxsatay Isutagga Imaradka ayaa codsatay in korinta carruurteeda iyada loo xilsaaro isla-markaana guurka qasabka ah laga ilaaliyo si aan looga xadgudbin.
Balse lama ogaan faahfaahinta codsigeedaasi, waxa kale oo ay Amiiradda maxkmadda ka dalbatay iney amar ka bixiso guurka qasabka ah in laga ilaaliyo.
Xaaska amiirka Dubai oo ku dhuumanaysa London
Sheikh Mohammed wuxuu isaguna codsaday carruurtiisa in Dubai lagu soo celiyo, wuxuu sida oo kale maxkamadda uu ka codsaday iney maxkamadda xayiraadaha la saaray ay ka qaaddo, waloow codsiga Sheekha uu garsooraha diiday.
Amiirad Haya waa tumaa?
Amiirad Haya Bint Xuseen waxay May 1974-kii ku dhalatay dalka Urdun waxayna wax ka baratay dugsi gaar loo leeyahay oo ku yaalla Britain, waxayna isku aabba yihiin boqorka haatan ee Urdun Boqor Cabadallaha Bin Al-Xuseen II.
Amiirad Haya ayaa haatan ah 45 jir, waxayna ka soo qalin jebisay Jaamacadda Oxford, oo ah halka ay ka soo baxeen inta badan madaxda Britain iyo dunidaba.
Image captionAmiirad Haya waxay wax ku soo baratay Jaamacadda Oxford ee dalka Britain
Waxay isku aabe yihiin boqorka haatan ee Urdun, Boqor Cabdalla Bin Al-Xuseen, balse hooyadeed, Boqorad Calya, waxay ku dhimatay shil diyaaradeed oo dhacay 1977-kii.
Haya bint Al-Xuseen waxay sheegtay in dhimashada hooyadeed kadib ay aad u murugootay, oo ay joojisay inay dadka dhex-gasho, ka dibna aabaheed, Boqor Xuseen, ayaa siiyay Faras, sidaasna waxay ku noqotay qof aad uga hela fardaha iyo tartamada la xiriira.
Sannadkii 2004-tii ayay is guursadeen Amiir Maxamad Bin Raashid, kaddibna waxay noqotay madaxa ururka fardayahannada caalamka, sannadkii 2014-ta ayay xilkaasi iska casishay 8 sano oo ay haysay ka dib.
Waa tuma Haya Bint Xuseen: Amiraadda ka baxsatay Imaaraadka Carabta
Amiir Maxamad Bin Raashid isaga waxaa uu London ku leeyahay goobta ugu weyn caalamka ee lagu xannaaneeyo fardaha, taas oo ay ku nool yihiin 4,500 oo faras, ayna ka shaqeeyaan ilaa 1,500 oo qof.
Amiirad Haya baxsashadeeda maxay ka tiri?
Amiiradda ayaa la sheegay in horraantii sanadkan ay u baxsatay dalka Jarmalka halkaa oo ay magangelyo weydiisatay, kadibna ay aaday magaalada London oo ay ku leedahay guri weyn.
Ilo wareedyo ku dhaw amiiradda ayaa sheegay in baxsashadeeda ay xiriir la yeelan karto gabadha uu amiirka dhalay ee Sheekha Latifa, taasoo si qasab ah loogu celiyay Dubai oo ay markii hore ka carartay.
Amiiradda ayaa si weyn u difaacday soo qabashada gabadhaasi, balse waxaa lagu soo warramayaa in markii dambe ay ogaatay xog ka qarsooneyd oo ku aaddan arinta gabadha.
Xaaskii Amiirka Imaaraatka oo ku gabanaysaa qasri $100 milyan ah, dacwadna diyaarsatay
Amiirad Haya ayaa ka cabsi qabta in sida gabadhaasi qasab loogu celiyo Dubai oo uu ka taliyo seygeeda.
July 2000, gabadh kale oo uu dhalay Shekh Mohamed oo lagu magacaabo Sheikha Shamsa Al Maktoum oo 19 jir ah ayaa iyaduna qoyskeeda ka baxsatay.
Sheekha hoggaamiye dhaqameedka ah
Maxamed bin Raashid wuxuu sannadkii 1949-kii ku dhashay gobolka Shindagha ee Dubai, waana da’da saddexaad ee carruurta afarta ah ee uu dhalay Sheekh Raashid Bin Saciid.
Aabbihiis sheikh Rashid wuxuu xukunka imaaradda Dubai hayey intii u dhexaysay 1958 iyo 1990, waxaana imaaraddaas si gaar ah u ilaaliya Ingiriiska marka loo eego imaaradaha kale ee Khaliijka.
Maxamed Bin Raashid wuxuu waxbarashadiisa hoose, dhexe iyo sare ku dhammaystay Imaaraadka, asagoo dugsigiisa sare dhammeeyey sannadkii 1965-tii.
Sannad ka dib wuxuu u wareegay dalka Ingiriiska asaga iyo ina adeerkiis, Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Maktoum, si uu u soo barto luuqadda Ingiriiska, wuxuuna ku biiray Iskuulka Luuqadaha ee Bell oo kuyaal Cambridge.
Markii uu dhammaystay barashada afka Ingiriisiga, wuxuu ku biiray kulliyadda ciidmaada Britain ee Munz, halkaas oo uu ka soo qaatay koorso lix bilood ah.
Maxamed bin Raashid wuxuu ka mid noqday dadkii bud dhigga u ahaa mashruucii lagu dhisay dawladda Isutagga Imaaraadka Carabta, taas oo ka koobnayd gole ay ku midaysan yihiin Imaaraadkii Carabta ee heshiiyey, waxaana xigay heshiis kii ay sannadkii 1968-dii ku midoobeen amiirkii hore ee Abu Dhabi sheikh Saayid bin Suldan iyo amiirkii hore ee Dubai Sheekh Raashid, tallaabadaas oo la oran karo waxay gogol xaar u ahayd dhismaha isutagga imaaradka.
Sannadkii 1969 ayaa Maxamed bin Raashid wuxuu madax ka noqday booliiska iyo ammaanka guud ee Imaaradda Dubai, waana xilkii dawladeed ee ugu horreeyey ee uu qabtay.
Sannadkii 1971-dii, waxaa xeebta Jumayra ee Dubai lagu saxiixay dastuurkii ugu horreeyey eek u meel gaarka ah si loo dhiso dawlad ay leeyihiin Isutagga Imaaraadka Carabtu.
Maalmihii xigayna waxaa la soo dhisay golo wasiirro oo uu madax ka ayhaay Sheekh Maktoum, wuxuuna walaalkiis u dhiibay wasiirka difaaca, wuxuuna noqday wasiirkii difaaca ee ugu da’da yaraa caalamka ee xilligaas.
Go’aanadii ugu adkaa ee uu qaatay in uu wasiiirka difaaca ahaa waxaa ka mid ahaa in ciidamo Isutagga Imaaraadka ka socda ay ka qayb qaataan xulufadii uu Maraykanku hoggaaminayey ee ciidmada Ciraaq looga saarayey dalka Kuwait sannadkii 1990-kii.
Dubai ayaa noqotay xarun ganacsi iyo mid dalxiis intii uu talada hayey Sheekh Raashid, kaas oo wiilashiisii u dhiibay mashaariic fara badan oo horumarineed.
Amiiraddii Imaaraadka “ee baxsatay” Ma lasoo helay?
Hawliii uu u xilsaaray wiilkiisa Maxamed waxaa ka mid ahaa in uu dhiso dekad ay doonyuhu ku xirtaan, iyo in uu madax ka noqdo guddiga madaarka Dubai ee caalamiga ah, iyo sidoo kale shirkadda shidaalka Dubai, oo loo arko isha Dhaqaalaha ugu weyn ee imaaraddaas.
Markii uu geeriyooday Sheikh Raashid sannadii 1990, waxaa xukunka kala wareegay Sheekh Maktoum.
Sannadkii 2006-dii ayaa Maxamed Bin Raashid wuxuu qabtay xukunka Imaaradda Dubai, ka dib markii oo uu dhintay walalkiis Maktoum Aala Makhtoum.
Sida uu sheegay wargayska Forbes, hantida amiirka Dubai waxay hoos ugu soo dhacday 6 bilyan oo dollar sanaddkii 2009-kii, sababo la xiriira qalalaasihii dhaqaalaha caalamka, waxaana “hantidiisa haatan lagu qiyaasaa 4 bilyan oo dollar” sida laga soo xigtay hay’adda Business Insider.
Mode Amma Faashinka Dharka Oo Somalia Ka Bilaabmay
India: Ninka Xaaskiisa Ku Fura 3 dalqadood Oo Wada Soda Ayaa Muteysan Doona 3 Sanno Oo Xabsi Ah
NORADIN HORMUUDKA WAXBARASHADA SOMALILAND